Globe-imbali: ezihlukahlukene amamaki
Globe-izimbali - lokhu ingenye izitshalo esithakazelisa kakhulu ecasha emahlathini Russian namasimu. Ezindaweni eningizimu, basuke sichithiwe ne ekuqaleni kwenkathi ukubhukuda, futhi ezaholela igama labo. Futhi, imbali unegama ukuthosa (izibani), ayamukela ngenxa elikhanyayo efihlekile ophuzi noma orange. BaseYurophu ushayele trolliusom isitshalo legends bathi imbali ozithandayo like izidalwa zezinganekwane.
Noma yimuphi cottager ungaphuthelwa ithuba ukuba kusayithi lakho ehlathini Globe. Kuyihlazo ukuthi isitshalo kungenzeka ukubona namuhla zezimbali, kuka endle ihlathi glades, kuthi nezinye izinhlobo ezithile zokupheka babe eNcwadini Red. Ngezinye izikhathi ungase uthole amanye amakhophi loMfula imifula, izimfunda, amachibi, lapho inhlabathi cishe ezomile.
I zezimbali kuvame ezifuywa zinhlobo European futhi Asian kanye nzalo.
Rasprostarnenny grade imbulunga European ifinyelela ukuphakama 80 cm, izimbali zawo ziwukudla ngasekupheleni May, lemon-ophuzi inflorescences eyindilinga 5 cm ububanzi, esisogwini umoba eside.
Hlunga Asian imbulunga ukwakha shrub kufika ku 70-80 ngamasentimitha. Ekupheleni kuka-May, izitshalo eziqhakaza izimbali elikhanyayo orange-6 cm ububanzi, okungase ukufisa cishe inyanga.
Phakathi trolliusov futhi babe imidondoshiya yabo, lafinyelela ukuphakama emihlanu-foot (imbulunga-eliphakeme), ekhula kuya emitheni yangakini nasembulungeni yonke-Chinese. Ngezansi grade Ledebour, izitshalo yemifino abhekwa zinhlobo acaulescent Junggar futhi ukuthosa, okuyinto akuvamile ifinyelela 20 cm ngokwemvelo.
Esikhathini nemibandela Russia kutshalwa izitshalo ziqala eziqhakaza ngasekupheleni May noma ekuqaleni kuka June, futhi isikhathi izimbali izinsuku ezingu 20-25.
Izimbali zingagwenywa-zikhule endaweni eyodwa kuze kube iminyaka engu-10 ubudala futhi ezimweni ezinhle ngokushesha kakhulu zikhule. Endabeni kumiswa okusheshayo isitshalo isihlahla kufanele ihlukaniswe yaba izingxenye eziningana futhi ubeke endaweni entsha.
Ngo izimo zemvelo, lesi sitshalo othanda pritenenie ababuthakathaka. Ekhaya ngoba isihlahla zisuswe ezindaweni libalele lapho ukuthosa umuzwa omubi, kodwa luphola esidlule. Lesi sitshalo kubangela yellowing kwanoma amahlamvu, futhi zidinga ukuthambisa njalo. Ezikhula iminyaka eminingi ube esilindele inhlabathi ukukhanya, nezinga eliphansi, asidi eduze kwezomshado, ngokuqukethwe ezinhle Peat, humus nesihlabathi. Lapho ukutshala nezihlahla Kunconywa emgodini engeza ezinye moss sphagnum, futhi umlotha.
Izimbali yangakini nasembulungeni yonke-ngokumangalisayo linesizotha, kodwa babe nobuthakathaka. Okokuqala, lesi sitshalo akakubekezeleli komhlaba amile, nakuba ithanda umswakama. Phakathi ukukhula kudinga ukuthambisa obuningi, ikakhulukazi ngenkathi yesomiso. In autumn amanzi kumele encishisiwe. Ukuze silungiselele globeflowers izihlalo ne amanzi okuhle. Awukwazi umbe phansi ngaphansi kwesihlahla, angadala umonakalo ohlelweni impande, sise ebusweni. inhlabathi Kuhle ukugcina zamulchirovat ifomu podsypaya ngaphansi ingxube ehlathini yesihlabathi Peat noma humus.
Izimbali yangakini nasembulungeni yonke-cishe iyagula. Ukuze kuvikelwe izikhathi eziningana isizini ngayinye kuyadingeka ukucubungula izinkuni umlotha isitshalo entwasahlobo kumele kukhiqize Umanyolo nitrogen fertilizer. Ngemva izimbali, abanye abalimi usike amahlamvu, esikhundleni lapho kukhona abasha. Ngakho, ukuthosa kuyinto ukuphela zokuhlobisa isizini, kodwa kulokhu kukhona Ukuwohloka simila. Ukuze avimbele izifo fungal kudingeka uthathe off amahlamvu efile, kusale kuphela ezingxenyeni eziphansi neziqu ngamasentimitha ambalwa.
Abadala ezihlabayo ukubekezelela frost futhi asidingi zokukhosela ezengeziwe.
Okusakazwa imbewu yangakini nasembulungeni yonke-self-seeding. Izithombo okuholela kungenziwa utshalwe ngasekupheleni kwehlobo endaweni unomphela. Hhayi izitshalo ezimbi bagxile abatshalwé uhlobo amahlumela amasha ezikhula kusukela onqenqemeni ehlathini.
Cherry fly: izindlela emzabalazweni
Zircon - Umanyolo ngempumelelo
Ingadi Secrets: zokutshala arborvitae ekwindla
Machines cutting-plasma metal CNC inhlangano: ezibekiweko lobuchwepheshe
I anomaly Arnold Chiari
Yini property moonshine CD-4?
Izitini Lungile laying ebusika: ubuchwepheshe okumele ilandelwe
Okukhethekile "State nokuphathwa kamasipala": labo ukusebenza?
Shellac ngesikhathi sokukhulelwa kuyingozi noma cha? Ngingaba ukupenda izinzipho zakho ngesikhathi sokukhulelwa Shellac?
Basalt ibhokisi: kwenye
"Vasileostrovskaya lapho kudayiswa khona utshwala" - Petersburg inkampani ye uhlobo olusha
I ukujiya ubuncane screed phansi. screed phansi ezomile. Ukubalwa screed phansi ukujiya
Car Mitsubishi ASX. Izibuyekezo